Zvipingaidzo Zvowanda muChirongwa cheKunyorwa kweBumbiro Idzva
Hurongwa hwekunzwa pfungwa dzevanhu pabumbiro remitemo idzva hunonzi hahuzi kufamba zvakanaka, sezvo vanhu vari kushanda muchirongwa ichi vari kunzi vari kutarisana nematambudziko zvikuru pakunyoresa, kuwanirwa pekugara pamwe nechikafu.
Mahotera mazhinji anonzi ari kuramba kutambira vanhu ava, nezvikonzero zvakasiyana siyana, izvo zviri kuzoita kuti komiti yeCOPAC ivatsvagire nzvimbo dzavari kuti dziri pasi.
MuHarare, zvinonzi vanhu vari kuramba kurara kuZESA Training Centre vachiti hakuna kukodzerana navo. KwaMutare zvinonzi vanhu vakazowanirwa pekurara nguva yapera, uye vari kuchema nenyaya yenzara. KuChinhoyi, zvinonzi chikwata cheko chakarambwawo pane imwe hotera.
Asi kuMidlands, vari kutungamira chikwata chiri kupinda muvanhu, VaJoram Gumbo veZanu PF, vanoti havana dambudziko ravari kutarisana naro sezvo zvinhu zviri kufamba zvakanaka.
Mubatanidzwa wemasangano ari kuongorora hurongwa uhu, weZimbabwe Independent Constitution Monitoring Project, kana kuti ZZZICOMP, uyo une masangano anoti Zimbabwe Lawyers for Human Rights, Zimbabwe Election Support Network, neZimbabwe Peace Project, unoti uri kushora komiti yeCOPAC nekutadza kufambisa zvinhu zvakanaka.
Mumwe wevari kutungamira mubatanidzwa wemasangano aya, VaDzimbabwe Chimbwa, vaudza Studio7 kuti zvavari kuwana pasi apa zvinoratidza kuti veruzhinji havana kuwana mashoko akakwana pamusoro pehurongwa uhu, sezvo COPAC isina kushambadza zvakakwana.
Hurukuro naVaDzimbabwe Chimbga